UFitbit uhlawule imali encinci ngeLitye kunokuba besicinga | IPhone iindaba
UFitbit uhlawule imali encinci ngePebble kunokuba besicinga
Xa besikuxelela ngoDisemba ukuba ingqalutye ifunyenwe njani nguFitbit malunga nezigidi ezingama-40 zeedola, besele siqwalasele ukuba eli nani beliphantsi kwinkampani ebingomnye wabokuqala ukufezekisa ukubaluleka okukhethekileyo kwihlabathi leewatchwatches. Ingqalutye yayingeyiyo enye yeewatchwatches zokuqala ukuba nefuthe lokwenyani kwihlabathi liphela, kodwa yakha noluntu olukhulu lwabalandeli abasebenza nzima ukuqhubela phambili iqonga ukuba libe lelinye lawona mabalulekileyo abalulekileyo kwicandelo. IpheEzi zizigidi ezingama-40 eziqikelelweyo ziye zahlala kuphela kwi-23 yezigidi zeedola, ngaphezulu kwesiqingatha semali yokuqala, njengoko iqinisekisiwe yiFitbit uqobo lwayo kwingxelo yayo yezoqoqosho.
Nangona amanani akuloo manqanaba enokuba nomtsalane, inyani kukuba ezo zigidi ezingama-23 zeedola zibonakala ngathi "zilutshintsho" lokwenyani kwinkampani enje ngeLitye elincinci, eyaziwayo kwihlabathi liphela, ukuba sithathela ingqalelo ukuba uFitbit uhlawule i-15 yezigidi ngomnye umenzi wee-smartwatches ezibizwa ngokuba yiVector Watch, ekungekho mntu waziyo. Okubi nangakumbi, uPebble uphakamise phantse i-23 yezigidi zeedola kwimikhankaso yayo emibini yokubuyisa imali kwiKickstarter. Kubonakala ngathi iqinisekisa ukuba imeko yezemali yeThebble yayingaphezulu kokuxinana kwaye yabangela ukuba yamkele phantse nasiphi na isibonelelo sokufunyanwa kwayo.
Imeko yeFitbit ayingcono, kwaye amanani ayo alo nyaka we-2016 awakhuthazi konke konke. Ngaphandle kwento yokuba ingeniso kulo lonke u-2016 inyukile xa kuthelekiswa ne-2015 (1.860 yezigidigidi zeedola ngo-2015 kunye ne-2.170 yezigidigidi zeedola ngo-2016), ukwanda kweenkcitho kuye kwakhokelela kwingeniso eyi-175 yezigidi zeedola ngo-2015 ukuya kwilahleko ye- $ 102 yezigidi ngo-2016. Siza kubona ukuba ezi zinto zisandula ukufunyanwa zikunceda ukuba uqalise ngemveliso eqhekezayo eza kukubuyisela kwinani elifanelekileyo okanye ube lelinye ixhoba lemarike ye-smartwatch enzima.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » UFitbit uhlawule imali encinci ngePebble kunokuba besicinga
Ilizwi lowasetyhini okanye lendoda labancedisi ababonakalayo?
Elinye ilungelo lomenzi lilungiselela inkqubo eyahlukileyo yokutshixa kwi-iPhone 8